Marwada Madaxweynaha oo Daah furtay koobka Kubadda Koloyga Janaraal Daa’uud oo xili habeen ah la ciyaarayo – Radio Muqdisho
Marwada Madaxweynaha oo Daah furtay koobka Kubadda Koloyga Janaraal Daa’uud oo xili habeen ah la ciyaarayo
Garoonka kubbada koleyga Aadan Xaaji Yeberoow Wiish ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa caawa ka furmay koobka Jeneraal Daa’uud, oo 24-sano kadib xilli habeen ah la ciyaarayo.
Tartanka caawa waxaa daah furay kooxaha kubadda kolayga ee Heegan iyo Plasma, waxaana furitaanka ciyaarta goob joog ka ah marwada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, madaxda guddiga Olombikada Soomaaliyeed ee GOS, maamulka xiriirka Soomaaliyeed ee kubbada Kolayga iyo mas’uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir.
Groonka kubbada kolayga ee Wiish ayaa waxaa caawa soo buux dhaafiyay taageerayaal iyo dadweyne aad u farabadan oo usoo daawasho tegay ciyaarta.
Dadweynaha caawa ku sugan garoonka kubadda kolayga ee Wiish ayaa muujinaya sida ay ugu faraxsanyihiin in tartamada kubbada kolayga, xilli habeen ah lagu ciyaaro magaalada Muqdisho.
Marwada madaxweynaha oo ka hadashay furaanka tartanka caawa ayaa khudbad qiiro leh halkaasi ka jeedisay halkaasi, waxeyna aad ugu amaantay xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda Kolayga, in 24-sano kadib ay suurtageliyeen in ciyaaraha kubadda kolayga xilli habeen ah lagu ciyaaro magaalada Muqdisho.
Sidoo kale marwada madaxweynaha ayaa sheegtay in ciyaaraha lagu qabanayo muqdisho xilli habeen ah ay taasi muujinayso nabadda ka aslaaxday magaalada Muqdisho.
Marwada Madaxweynaha ayaa khudbadeeda kadib si rasmi ah u furtay tartanka ciyaaraha Koobka Jemeraal Daa’uud oo lagu qabanayo garoonka kubadda Kolayga ee Wiish.
Shir Madaxeedka Midowga Afrika oo Ka Furmayo Adis Ababa “SAWIRRO”